Shiinaha HTPB warshad iyo soosaarayaasha | Kiimikada Kiimikada
Heerka fulinta: GJB 1327A-2003
1.1 Sheeko kooban: HTPB waa polymer dareerayaal teleclaw ah iyo nooc ka mid ah qashinka. Waxay ku falcelisaa fidinta silsiladda, wakiilka iskutallaabta isku xidha ama daaweyn heerkulka qolka ama heerkulka sare si loo sameeyo qaab-dhismeedka shabakad saddex-cabbir leh oo polymer-ka heer-kulmeedka ah. Waxay leedahay astaamo aad u fiican, sida, astaamaha farsamada wanaagsan, iska caabinta hydrolysis, aashitada iyo caabbinta alkali, xirashada iska caabinta, dulqaadka heerkulka qabow, hantida dahaarka korantada.
1.2 Qaaciddada qaabdhismeedka:
2. Tilmaamaha farsamada ：
Nooca I-Wax laga beddelay
Qiimaha Hydroxyl, mmol / g
Viscosity (40 ℃), Pa · s
Dareeraha saliida leh ee Transparent, ma laha wasakhda muuqata
3. Codsiga: Waa mid hufan, u nugul yar, u adkaysiga da'da, waxqabadka heerkulka hooseeya ee wanaagsan iyo waxqabadka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu rido elastomer qalabka dhismaha taayirka baabuurta iyo diyaaradda, qalabka dhismaha, qalabka kabaha, alaabada caagga ah, kuleylka kuleylka, dahaadhka, dhejiska, qalabka wax lagu duubo, qalabka daweynta korontada, biyaha iyo qalabka ka hortagga daroogada, orodka. , Suunka gudbiyaha xirta-iska caabbinta, ku darista wax ka beddelka cinjirka iyo dhoobada epoxy, iwm. Waxaa si gaar ah loogu adeegsadaa sidii dhajiyaha ku jira isku-dhafka adag ee isku-dhafan.
4. Xidhmo; 50L baaldi caag ah oo polyetylen ah oo balaastig ah oo afka aan ka yarayn 100 mm, 50 kg halkii baaldi.
5. Kaydinta ： Waxaa lagu kaydiyaa meel qabow, qalalan oo hawo leh. Xaaladda kaydinta ee ugu wanaagsan ayaa u dhexeysa -20 ～ 38 ℃. Nolosha shelf: 12 bilood. Weli waa la heli karaa haddii natiijooyinka dib-u-eegista guryaha ay u qalmaan taariikhda dhacday ka dib.
6. Gadiid: Iska ilaali roobka iyo qoraxda lagu kariyo. Ha ku dhex darin oksidheejiye xoog leh.
Hore: 3,3′-bis (azidomethyl) oxetane / THF copolymer
Xiga: p-Benzoquinone dioxime
Soo saaraha bakhaarka
Waxqabadka waxqabadka sare
3,3′-bis (azidomethyl) oxetane / THF copolymer